Zuru ezu Ozi banyere CHECKDB Error "Nke a na usoro table index ike recreated."
Home ngwaahịa DataNumen SQL Recovery CHECKDB Error: Nke a Isiokwu Isiokwu Index-agaghị recreated.
Zuru ezu Ozi banyere CheckDB Error "Nke a na Isiokwu Isiokwu Index-agaghị recreated."
Msg 2510, Ọkwa 16, State 17, Line 8
DBCC checkdb njehie: Nke a na usoro table index ike recreated.
Mmezi: Ndekọ ahaghị aha nke ọma rụzigharịrị maka ihe “sysidxstats” na nchekwa data “Error1”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysschobjs'.
Enwere ahịrị 2262 na ibe 29 maka ihe “sys.sysschobjs”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.syscsrowgroups'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.syscsrowgroups”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysexttable'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysexttables”.
Enwere ahịrị 888 na ibe 16 maka ihe “sys.syscolpars”.
Mmezi: The Clustered index ọma wughachi maka ihe “sys.sysidxstats” na nchekwa data “Error1”.
Mmezi: Peeji (1:40) ka etinyere site na ihe ID 54, ihe ntinye aka ID 1, NJ ID 281474980249600, weputara ID ID 281474980249600 (pinye ihe na ntinye)
Mmezi: The Nonclustered index ọma wughachi maka ihe “sys.sysidxstats, nc” na nchekwa data “Error1”.
Njehie okpokoro: A ga-ewughachi NJ ID 54, ihe ntinye 1.
Ihe ID 54, Ndenye ID 1, nkebi ID 281474980249600, nyefee ID ID 281474980249600 (pịnye data ntinye): Page (1:40) enweghị ike ịhazi ya. Hụ njehie ndị ọzọ maka nkọwa.
Njehie tebụl: Ihe NJ 54, Ndenye ID 1, NJ ID 281474980249600, wepụta ID ID 281474980249600 (pịnye data ntinye), ibe (1:40). Nwale (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dara. Ueskpụrụ bụ 2057 na -4.
Njehie tebụl: Ihe ID 54, NJ ID 1, NJ ID 281474980249600, wepụta ID ID 281474980249600 (pịnye data ntinye). Ahụghị Page (1:40) na nyocha ahụ n'agbanyeghị na ndị mụrụ ya (1: 163) na ndị gara aga (1: 34) na-ezo aka na ya. Lelee njehie ọ bụla gara aga.
Njehie tebụl: Ihe NJ 54, Ndenye ID 1, NJ ID 281474980249600, wepụta ID ID 281474980249600 (pịnye data ntinye). Peeji (1:164) na-efunahụ ntụaka maka ihu akwụkwọ gara aga (1:40) Enwere ike inwe nsogbu njikọta.
Njehie okpokoro: A ga-ewughachi NJ ID 54, ihe ntinye 2.
Enwere ahịrị 130 na ibe 4 maka ihe “sys.sysidxstats”.
CHECKDB hụrụ njehie oke 0 na njehie anọghị anọ na okpokoro 'sys.sysidxstats' (ihe ID 4).
CHECKDB doziri njehie oke 0 na njehie anọ anọ na tebụl 'sys.sysidxstats' (ihe ID 4).
CHECKDB hụrụ njehie oke 0 na njehie asatọ na nchekwa data 'Error4'.
CHECKDB ofu 0 oke njehie na 4 anọgidesi njehie na nchekwa data 'Error1'.
SQL Server achoputara ezi uche dabere na njehie I / O: checksum adabaghị (echere: 0x4bbecdad; real: 0x0bbfc5ad). O mere n'oge a na-agụ peeji (1:40) na nchekwa data ID 39 na dechapụ 0x00000000050000 na faịlụ 'C: Mmemme faịlụMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Ozi ndị ọzọ na SQL Server njehie log ma ọ bụ usoro ihe omume log nwere ike inye nkọwa ndị ọzọ. Nke a bụ ọnọdụ ajọ njọ nke na - eyi egwu iguzosi ike n’ezi ihe nchekwa data ma mezie ya ozugbo. Mezue nchịkọta nchekwa data zuru ezu (DBCC CHECKDB). Enwere ike imehie nje a site n'ọtụtụ ihe; maka ozi ndị ọzọ, lee SQL Server Akwụkwọ na ntanetị.
Nwada 2510 na-egosiputa ihe egosiputara usoro ihe di iche nke teepu enweghi ike imeghari ya, nke bukwa njehie.
Mgbe CHECKDB hụrụ na enweghị esemokwu na ndepụta nke otu tebụl usoro, ọ ga-akọ akụkọ njehie Nwada 2510 ma gbalịa idozi njehie ndị ahụ. Ọ bụrụ na ọ nweghị ike idozi njehie ahụ, mgbe ahụ mgbake na-ada ma na-eduga na njehie ndị ọzọ, dị ka Nwada 824.
Ihe nlere mebiri MDF faịlụ nke ga - eme ka Nwada 2510 njehie:
SQL Server 2014 Njehie6.mdf Njehie6_fixed.mdf